Dagaal ka dhan ah Al Shabaab oo lagu dhawaaqay (AKHRISO) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday Dagaal ka dhan ah Ururka Al Shabaab, kadib markii ay kordheen Weerarada ismiidaaminta ah ee Ururka ay ka fuliyaan Magaalada Muqdisho.
Go’aankan ayaa yimid Kadib kulan deg deg ah oo uu Ra’iisul Wasaare Xasan Cali kheyre uu la qaatay taliyeyaasha ciidamada AMISOM, kuwa dowladda iyo Safiirada Caalamka.
Kulankan ayaa waxaa lagu go’aamiyey dagaalka ka dhanka ah Ururka Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay safiirada Caalamka ka jooga Soomaaliya ay ka codsatay inay ka taageeray dhinacyada Amniga iyo dagaalka Shabaab looga saarayo deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin Soomaaliya,isla markaana ay u balan qaadeen.